ဝါးခယ်မ : ငှက်ပျောဖူးသုပ်နဲ. ငှက်ပျောဖူးချက်
ဒါကတော. ဖြိုးဇာသွင် (Phyo’s Cooking Adventure)ရဲ. ချို၊ ချဉ်၊ ငန်၊ စပ် ငှက်ပျောဖူးသုပ်ပါ
ဒီတစ်ပတ်တော့ ငှက်ပျောဖူးကို သုပ်စားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ နေကလည်း ပူတော့ ဘာစားစား
အရသာ သိပ်မတွေ့လှတာကြောင့် ချို၊ ချဉ်၊ ငန်၊ စပ် အသုပ်လေးတွေနဲ့ ခံတွင်း တွေ့အောင်ရယ်၊
မီးဖိုထဲမှာလည်း သိပ်ပြီးအကြာကြီး မနေချင်တာရယ်ကြောင့် အသုပ်လေးတွေကို တန်းစီပြီး ရေးဖို့
မိဘအိမ်မှာ နေတုန်းကဆို အမေက ငှက်ပျောဖူးကို ပုစွန်ခြောက်လေးနဲ့ပဲ နှပ်ပြီး ချက်လေ့ရှိပြီး ဖြိုး
တို့ညီအစ်မတွေ အကြိုက်ဆုံး ဟင်းတစ်ခွက်ပေါ့။ ငှက်ပျောဖူးသုပ်ကိုတော့ ဆစ်ဒ်နီရောက်မှ ထိုင်း
ငှက်ပျောဖူး စိမ်းကို ပါးပါးလှီးပြီး သုပ်ထားပေမယ့် မဖန်ပဲ စားလို့ကောင်းပါတယ်။
ပုစွန်နဲ့ တွဲပြီး သုပ်လေ့ရှိသလို ကင်းမွန်/ ပြည်ကြီး ငါးကို မီးကင်ပြီးတော့လည်း ရောသုပ်လေ့ရှိကြ
သူက အရသာထက် ထုတ်ထုတ်လေးနဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ၀ါးရတာက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာ
ဖန်တန်တန် အရသာ ရှိတတ်တာမို့ ချို၊ ချဉ်၊ ငန်၊ စပ် အရသာနဲ့ တွဲမှ စားလို့ ကောင်းပါတယ်။
ရန်ကုန် ပြန်ရောက်ကတည်းက နေရာတကာမှာ တွေ့တဲ့ ငှက်ပျောဖူးတွေကို မျက်စောင်း ထိုးထား
တာ အခုမှပဲ သေချာသုပ်စားဖြစ် တော့တယ်။
ငှက်ပျောဖူးကို အမျိုးမျိုး သုပ်စားကြပေမယ့် ဒီနွေပူမှာ ခံတွင်း တွေ့စေမယ့် ဗီယက်နမ်စတိုင်နဲ့
ထိုင်းစတိုင် အသုပ်နှစ်မျိုးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
နောက်ကြုံရင် တခြားနည်းလေးတွေ ထပ်ဝေမျှ ပေးပါဦးမယ်။
ငှက်ပျောဖူး (အသေး) နှစ်ဖူး
ပုဇွန် (အသေး) ၆-၈ ကောင်
နံနံပင် (လှီးပြီးသား) ၁/၄ ခွက်
ငရုတ်သီး အနီ ၁/၂ တောင့်
ထန်းလျက် (အဖြူ - ခြစ်ပြီးသား) စားပွဲဇွန်း နှစ်ဇွန်းခွဲ
သံပရာရည် (ညှစ်ယူပါ) ၁/၃ ခွက် (၈၀ မီလီလီတာ)
ငံပြာရည် စားပွဲဇွန်း ၁/၃ ခွက် (၈၀ မီလီလီတာ)
ငရုတ်သီးဆီချက်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ စားပွဲဇွန်း တစ်ဇွန်း
ငှက်ပျောဖူးများမှ အခွံအနီများကို ခွာပါ။ အ၀ါနုရောင် (သို့) အရောင် ဖျော့ဖျော့ ရောက်သည်အထိ
အခွံများ ကို ခွာပါ။
အထဲမှ ငှက်ပျောသီး သေးသေးလေးများကို ထုတ်ပစ်ပါ။
ပြီးတဲ့အခါ ငှက်ပျောဖူး လှီးပြီးသားများကို စိမ်ဖို့အတွက် အချဉ်ဓာတ်ပါသောရေကို အရင်ပြင်ပါ။
ရေ တစ်လီတာတွင် သံပရာရည် ၁/၄ ခွက် (၆၀ မီလီလီတာ)ထည့်ပြီး မွှေပါ။
ထို့နောက် ငှက်ပျောဖူးများကို အကွင်းလိုက်ပါးပါးလှီးပြီး ပြင်ထားသော ရေထဲသို့ ချက်ချင်း ထည့်၍
ငှက်ပျောခွံများထဲမှ အရွက်ကြီးပြီး လှသော အဖတ် ၁-၂ ခုကို ဖယ်ပြီး ရေစင်အောင်ဆေးကာ
ဟင်းပွဲ ပြင်ရာမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။
ဒါလေးကတော. Burmese taste - Iora ရဲ. ငှက်ပျောဖူးချက်ပါ
ဦးဆုံးအပေါ်လွှာအကြမ်းတွေကိုနုတာရောက်တဲ့ထိ တလွှာပြီးတလွှာ ခွာထုတ်ပစ်ရပါတယ်။ အဖူးလေးတွေနုတာတွေ့ ရင်လည်း ခြွေပြီးယူထားပါတယ်။ လွှာရင်းလွှာရင်း နဲ့ မကျန်သလောက်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ မလောက်မှာတော့ပူစရာမလိုပါဘူး။ သူကဒီလိုမျိုးဆုိုမနည်းပါးစပ်ထဲခွံ့ ကျွေးမှစားတာဆိုတော့လေ။
Source ; /myanmar.mmtimes.com & http://mamaiora.blogspot.com
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 12:00 PM